အလင်းရောင် ထွန်းတောက်ခြင်း - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-01 > အလင်းရောင်ထွန်းလင်းနေသည်
ဗက်လင်မြို့အနီးရှိ လယ်ပြင်တွင် သိုးထိန်းများသည် ညအချိန်၌ သိုးထိန်းများသည် ရုတ်ခြည်း တောက်ပသော အလင်းတန်းများ ဝိုင်းရံလာသောအခါ၊ “ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် သူတို့ထံသို့ လာ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ရောင်ခြည်တော်သည် သူတို့ပတ်လည်၌ ထွန်းတောက်၍၊ သူတို့သည် အလွန်ကြောက်ကြ၏။” (လု 2,9).
သူနှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့၏ကြီးမားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ သိုးထိန်းတွေသွားပြီးမာရိနဲ့ယောသပ်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်တွေဟာအဝတ်တွေပတ်ရစ်နေတယ်၊ ​​ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးသူတို့ကြားတာတွေ၊
လယ်ကွင်းရှိအပယ်ခံလူများ၊ သိုးထိန်းများကိုကောင်းကင်တမန်ကကြွေးကြော်သောကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိသည်။ သူတို့သည်သတင်းကောင်းကိုနေရာတိုင်းတွင်ပျံ့နှံ့စေခဲ့သည်။ သို့သော်မင်္ဂလာရှိသောအဖြစ်အပျက်သည်မပြီးဆုံးသေးပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်၊ ယေရှုသည် လူများတို့အား မိန့်တော်မူသောအခါ၊ “ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည် မှောင်မိုက်၌မကျင်လည်ဘဲ အသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည်။” (ယော 8,12).
ဖန်ဆင်းခြင်းဇာတ်လမ်းတွင်သမ္မာကျမ်းစာသည်အလင်းကိုမှောင်မိုက်နှင့်ခွဲခြားထားကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာမှသင့်အားပြသည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုမအံ့သြသင့်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသင့်ကိုမှောင်မိုက်ထဲမှခွဲထုတ်ပေးသောအလင်းဖြစ်သည်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ သင်သည်ယေရှုနောက်သို့ လိုက်၍ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်လျှင်၊ သင်သည်ဝိညာဉ်ရေးမှောင်မိုက်၌လမ်းလျှောက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲအသက်၏အလင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ဘဝအလင်းသည်သင့်တွင်တည်ရှိသောအခါသင်သည်ယေရှုနှင့်အတူရှိပြီးသင်မှတစ်ဆင့်ယေရှုကသင်ထွန်းလင်းတောက်ပသည်။ ခမည်းတော်သည်ယေရှုနှင့်အတူရှိတော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်လည်းသူနှင့်အတူရှိကြ၏။
သခင်ယေရှုသည် သင့်အား ရှင်းလင်းသောမစ်ရှင်တစ်ခု ပေးသည်- “သင်သည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘကို ချီးမွမ်းခြင်းငှာ လူတို့ရှေ့မှာ သင်တို့၏အလင်းကို လင်းစေကြလော့။” (မဿဲ၊ 5,14 နှင့် ၁၄)။